Nyefe ùkwù okooko osisi na Moscow
Ego 100 rubles na ngwa! Budata ngwa ahụ
Ego 100 rubles na ngwa!
Budata ngwa ahụ
Dont chọrọ ya, daalụ
Ee Họrọ ọzọ
Ọrụ gọọmentị etiti
Ifuru di iche iche
Ruo 2000 rubles
Site na 13000 rub
8 800 600-54-97 Ma ọ bụ dee ya service.floristum.ru/en
Ifuru nnyefe Moscow. Zụrụ mmebe ùkwù okooko osisi
Bouquet nke pink pink “Aqua” Roses 19 pc nwere akwa eji achọ mma na akwụkwọ Kraft crinkled.
100 ₽ ego na ngwa
3100 XNUMX ₽ Bouquet nke Roses "Kasandra"
na 2 awa 30 nkeji
Zipu ngwa njikọ
Ihe ọkụkụ nke oge. Bọọlụ na ifuru.
6900 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 238
Orchid Shrub peony bilitere Eucalyptus Eustoma Alstroemeria Anemones
4900 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 275
Ugbo ala na - ejide - 6 PC.
Otu isi bilie - 19 PC.
A bouquet na-enwu gbaa nke abụọ Roses na dianthus na a nkecha ngwugwu.
4300 XNUMX ₽ Ọkụ
Rose - 10 PC.
Eustoma (Lisianthus, Japanese bilie) - 11 PC.
anyị na-ekwe nkwa na freshness nke okooko osisi .. nnyefe si awa abụọ ... the bouquet excites the imagination with femininity. acha uhie uhie mara mma na eustoma mara mma na-ebikọ ọnụ na nhazi ifuru.
6126 XNUMX ₽ Ihunanya bouquet.
Mbukota - 2 pc.
oh, lee ka ihe a na-emetụ n'ahụ na nke ihunanya a! e mere ya maka nwoke impeccable na ụbọchị zuru oke.
6681 XNUMX ₽ "Quivering ịhụnanya"
Bouquet na agba agba nke 9 aqua Roses, 5 ọcha alstroemeria, 7 acha anụnụ anụnụ irises, 6 yellow solidago, 1/2 mkpọ salal greens na mmebe nka akwụkwọ.
4700 XNUMX ₽ Bouquet nke okooko osisi "Florida"
Ihe mejupụtara obi nke ude uko 51 nke "Taleya" di iche iche.
9250 XNUMX ₽ Mejupụtara obi nke Roses (51 Roses)
minigerbera 5, lisianthus 3, alstroemeria 3, ohia bilie 3, pistachio, salal, mesh
4050 XNUMX ₽ Bouquet nke okooko osisi
rose aqua 9, orchid 8, alstroemeria 3, ozatamnus 3, salal 1 mkpọ, kraft akwụkwọ.
5860 XNUMX ₽ Bouquet nke okooko osisi "Akwa mmetụta"
Obi bouquet nke 40 na-acha uhie uhie na otu Roses ọcha.
5450 XNUMX ₽ Bouquet-obi nke Roses (41 Roses)
Bouquet nke obere chamomile 25 PC, odo tulips 16, rịbọn
6650 XNUMX ₽ Bouquet nke daisies odo tulips "Na-enwu"
<% ngwaahịa. ndebanye%>
<% ngwaahịa. obosara%> cm
<% ngwaahịa. ogologo%> cm
<% ngwaahịa.clientPrice%> ₽ <% ngwaahịa.aha aha%>
nnyefe ifuru <% product.deliveryTime? Oge: 'site na 2h.' %>
Ndo, ọ nweghị onyinye na obodo Moscow dịka usoro ị kọwara,
gbalịa gbanwee usoro ọchụchọ gị.
Na Moscow ọ ga-ekwe omume ịtụ nnyefe nke ụdị ùkwù ndị a:
Kpochapụwo mono bouquets
Bouquet nke acha uhie uhie 19, 15 ruscus, onyinye ejiri.
3060 XNUMX ₽ Bouquet nke acha uhie uhie (19 Roses)
Bouquet na uhie uhie nke 15 minigerberas na elu, egbe na nkwakọ ngwaahịa: nka na ịgbachi nkịtị.
3050 XNUMX ₽ Bouquet nke okooko osisi "Red Gerberki"
Bush chrysanthemum - 15 PC.
bouquet nke 15 ịgba chrysanthemums
4900 XNUMX ₽ bouquet nke 15 ịgba chrysanthemums
Bush chrysanthemum - 51 PC.
Ọmarịcha ùkwù nke 51 chrysanthemums
11790 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 222
Mbukota - 1 pc.
Mara bouquet ọcha alstroemeria na nka.
5776 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 234
Rose - 25 PC.
Igbe - 1 pc.
Nkecha bouquet nke acha odo odo Roses na okpu igbe. Ihe a mara mma ga - abụ onyinye magburu onwe ya maka emume ọ bụla ma ọ bụ ihe omume ọ bụla. Okpu a ga-enye ndi ị hụrụ n'anya obi uto.
5896 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 245
Bush bilie - 15 pc.
Otu isi bilie - 9 PC.
Maa mma ịgba Roses jikọtara na splashes uhie kpochapụwo bilie.
5090 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 211
Iris - 25 PC.
anyị na-ekwe nkwa na freshness nke okooko osisi. nnyefe site elekere abụọ ... a bouquet of blue irises as a onyinye bụ a na-ekpo ọkụ, siri na nụchara anụcha ihe ịrịba ama nke ịhụnanya na mmasị, nke ga-eme ka naanị ezi mmetụta uche na-agaghị na-ele kwa pretentious. irises, na-egosi ịdị ọcha, ịdị ebube na oge ọhụrụ mmiri, abụghị n'efu nke ọtụtụ ndị mara mma hụrụ n'anya!
6576 XNUMX ₽ Bouquet nke irises
ruo 1 awa
a bouquet nke icha mmirimmiri peonies pink, obi abụọ adịghị ya, nwa agbọghọ ọ bụla ga-enwe obi ụtọ ịnata, n'ihi na okooko osisi ndị a pụtara ịhụnanya na ịhụnanya nke onye nyere na-eche maka onye nyere onyinye ya. Ihe eji eme ihe eji eme akwukwo eji eme ya na satin mpe akwa pink ga-emeju ihe a na-eme ya, na-eme ka o dikwa nma na nke mbu!
Bouquet nke 21 (70cm) odo Roses.
4594 XNUMX ₽ Bouquet nke 21 odo Roses
Osisi shrub dị na genus nke hips, nke pụtara na onwa ihe dịka 40 nde afọ gara aga. Taa ụdị a na-ejikọ ihe dị ka ụdị 250 nke osisi dị iche iche na ihe karịrị 200 puku ụdị. Na mbu, akpọrọ rose ahụ okwu Peshia oge ochie "wrodon", mgbe ahụ n'asụsụ Greek a kpọrọ ya "rhodon". Ka oge na-aga, ndị Rom gbanwere okwu a ka ọ bụrụ "rosa". N'ebe dị jụụ ma na-ekpo ọkụ nke Northern Hemisphere, a ga-ahụ Roses n'ọhịa, ha adịghị mma na mma ma bụrụ ezigbo ọka na-esi ísì ụtọ. Taa, ndị na-elekọta ubi na-etolite ụdị dịgasị iche iche na ngwakọ nke osisi a, nke a na-ahụkarị site na mma ịtụnanya nke okooko osisi. Ha na-ewu ewu karịsịa ọ bụghị naanị n'etiti ndị na-akụ okooko osisi, ndị na-elekọta ubi na ndị na-emepụta ọdịdị ala, kamakwa n'etiti ndị niile hụrụ mma n'anya.
4512 XNUMX ₽ Bouquet nke 31 ịgba Roses mix
5806 XNUMX ₽ Bouquet nke 11 peony ịgba Roses
Gosi umu akwukwo ndi ozo
Ifuru na igbe
sunflowers 7, buplerum 2, pinkum iyi 4, obere chamomile 3, nigella-acha anụnụ anụnụ 5, ammonium 2, limonium odo 3, salal 2/3, eucalyptus 1/2, igbe-ngwugwu, envelopu oghere.
8710 XNUMX ₽ Mejupụtara si sunflowers "Anyanwụ ngwugwu"
Obi igbe 1 pc, ohia bilitere 7 PC, akwụkwọ ozi chocolate 5 PC
3350 XNUMX ₽ Igbe na Roses "Hearthụnanya Obi"
Peony 1 pc Eustoma 2 pc Nwere otu isi bilie 3 PC Nwee elu 3 pc Alstroemeria 3 pc Single-head carnation 1 pcs Eucalyptus
3900 XNUMX ₽ Marshmallow ụtụtụ
Eustoma (Lisianthus, Japanese bilie) - 1 PC.
Peony bilitere - 1 pc.
Otu isi bilie - 3 PC.
Mimic mejupụtara, adabara ma obere adaeze na ndị ukwu)))
3600 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 248
Orchid Eustoma Alice Rose otu-isi Alstroemeria Eucalyptus
4400 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 305
Bush bilie - 21 pc.
Anyị na-ekwe nkwa na freshness nke okooko osisi .. nnyefe si awa abụọ ... kpochapụwo red ịgba Roses na nkecha na-acha ọcha igbe, mma na ịchọ nlezianya satin ụta, anya nụchara anụcha, nkecha na mara. mee otito na mbido diri onye ị hụrụ n’anya na onye ị hụrụ n’anya!
4559 XNUMX ₽ "Ọrụ satin"
Otu isi bilie - 101 PC.
Ezochila mmetụta gị, gwa anyị banyere ha na a bouquet nke pink Roses! Okpu mara mma na ịdị nro pụrụ iche na-egosipụta ọdịnala, ịma mma, ntoputa nke mmetụta ọhụụ. Osisi pink na-egosikwa ọmịiko na ụzọ aghụghọ nke enweghị mmasị na nwa agbọghọ. Okpokoro okpu a na-etinye agba ahụ na-enye ya ọgbara ọhụrụ, nkecha na ọhụụ. A ga-enwe ekele maka onyinye dị otú ahụ!
17680 XNUMX ₽ Pink nrọ
Tulip - 49 PC.
A bouquet nke 49 anwụ na-acha odo odo tulips na a okpu igbe bụ ihe kasị mmiri na ịchọ nlezianya onyinye i nwere ike iche banyere. Nnukwu buds nke tulips na-eju anya na ọkaibe nke ndò na ngbanwe dị nro nke ụda na petal, ha niile na -emepụta otu egwu nke ịhụnanya, ịhụnanya na ịdị nro.
5848 XNUMX ₽ Anwụ na-acha ụbọchị.
Onyinye onyinye nke ịgba Roses 3 PC, ngalaba spruce, pawuda 2 pc, ihe ndozi nke afọ ọhụrụ, yana mmanụ a honeyụ 3 pc.
5750 XNUMX ₽ New Year mejupụtara "Cretaceous"
Igbe nke ịgba Roses nke ụda olu dị nro, yana mkpụrụ osisi tomato: strawberries, raspberries, blakberị, yana French truffles.
8850 XNUMX ₽ Igbe na okooko osisi, tomato na ato uto "Formula nke ịhụnanya"
Orchid 3, ịgba bilitere 4, ferrero 7, eucalyptus, pistach, salal, hatbox
3950 XNUMX ₽ Igbe na okooko osisi na ato uto "Janie"
Ndokwa na okpu okpu nke 5 Aqua Roses, 5 green cymbidium orchids, 7 spray pink roses, 5 pink hyacinths, 9 white freesias, 3 white lisianthus, 1/2 pack of eucalyptus.
9450 XNUMX ₽ Ndokwa na okpu igbe "Mma mara mma"
Gosi okooko osisi niile na igbe
Nkata nke Kenya 25 nwere ọtụtụ agba na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
4750 XNUMX ₽ Nkata nke Roses (25 Roses)
Nkata nke otutu freesias 25 nke nwere otutu ihe eji acho mma n’ime nkata.
7300 XNUMX ₽ Nkata nke okooko osisi "Multicolored freesia na nkata"
Nkata nke 15 ọtụtụ agba alstroemerias na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
5000 XNUMX ₽ Nkata nke alstroemeria mara mma (19 PC)
iris 7, lisianthus 3, ohia bilie 2, tulip 10, statice 1, greenery, nkata
6800 XNUMX ₽ Nkata nke oge opupu ihe ubi okooko osisi "Mmiri na-enwu gbaa"
Nkata na agba na-egbuke egbuke nke Roses 19 pcs, alstroemeria 10 PC, germini 18 pcs, spray roses 5 pcs, irises 13 PC, solidagi 10 PC. eji ahịhịa mara mma na nkata onyinye.
14850 XNUMX ₽ Nkata na okooko osisi "Ndagwurugwu Sun"
Akara nke tulips 25 nwere otutu nwere ihe eji eme ya.
4850 XNUMX ₽ Nkata nke otutu agba tulips "Spring Kaleidoscope"
Nkata nke tulips nwere ọtụtụ agba dị iri na asatọ na acha anụnụ anụnụ iri na asaa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
5650 XNUMX ₽ Nkata na tulips na irises "Ọkara otu awa tupu oge opupu ihe ubi"
Otu nkata na pink pink nke 5 Aqua Roses, 4 ịgba Roses, salal, pistachio.
3050 XNUMX ₽ Nkata na Roses "A obere otito"
Basket of red, orange, yellow minigerberas 11 pcs, daisies 3 pcs, white alstroemeria 3 pcs, ruscus 15 pcs, rịbọnụ ịchọ mma 3 PC.
4650 XNUMX ₽ Ifuru nkata "N'oge okpomọkụ a"
Orchid 13 pcs Onye-isi bilie 7 pc Eucalyptus Lilac 3 pcs Nkata Satin rịbọn
10700 XNUMX ₽ Obi ebere
Nkata - 1 pc.
Ọhụrụ okooko osisi bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa mmiri nke ọ bụla festive ezumike. ọmarịcha ùkwù na nhazi ifuru pụrụ iche nwere ike ịbụ naanị onyinye ma ọ bụ ihe ịchọ mma ọhụụ nke ime ọ bụla. ị nwere ike ịmepụta ọmarịcha okooko osisi kachasị mma n'ụwa site na iji usoro nka.
31555 XNUMX ₽ Pink paradaịs
Nkata nke 51 odo ịgba Roses na ji achọ greenery na nkata.
13550 XNUMX ₽ Nkata nke Roses "Anyanwụ" (51 Roses)
Gosi nkata ifuru
Nkata nkpuru osisi
Mejupụtara n'ime igbe-obi nke ọhụrụ strawberries 700 gr na snow-ọcha gypsophila 3 PC.
4950 XNUMX ₽ Mejupụtara n'ime igbe nwere okooko osisi na mkpụrụ osisi "Strawberry shine"
Nkata ya na nkpuru osisi: strawberries 500 gr, blakberi 125 gr., Raspberries 125 GR, blueberries 125 gr, currants 125 gr, macarons 14 PC.
8150 XNUMX ₽ Nkata "Tomato na macaroons"
pineapple 1, apụl na-acha uhie uhie 2, apụl na-acha akwụkwọ ndụ 2, apụl apụl 2, lemon 1, oroma 3, tangerine 3, kiwi 2, banana 5, pear 2, mkpụrụ vaịn na-acha akwụkwọ ndụ 1, mkpụrụ vaịn ojii 1
5750 XNUMX ₽ Mkpụrụ osisi “Mkpụrụ ọhụrụ”
Strawberries (Strawberries) - 32 PC.
Onyinye pụrụ iche sitere na Strawberries zuru oke maka enyi nwanyị gị. Mama na nne nne ga-enwe mmasị n'ụyọkọ nke mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, dị ka ihe ịrịba ama nke imekọrita n'ihi ogologo oge na-anọghị !!!
4620 XNUMX ₽ Strawberries na Roses.
Obi yiri udi nke emere: nkpuru ahihia 500 gr., Raspberries 125 gr., Blackberries 125 gr., Blueberries 125 gr., Currants 125 gr.
7450 XNUMX ₽ Obi igbe "Berry mix"
Nkpuru osisi nkpuru osisi: Thai watermelon 1, pomelo royal 1, pitahaya 1, odo pitahaya 2, kaffir lime 1, mmanya nwa aki oyibo 1, 4 iche mango di iche iche, carambola 4, mini painiapulu 1, guava 1, ogologo 1, ahuhu mkpụrụ 3 , ọlaedo 3 nke kiwi, mangosteen 4, pọọpọ 1, rambutan 10, grandilla 3, aki oyibo 1 mgbe niile, ngwugwu physalis 1, - yana osisi Vanda 3 orchid, cymbidium orchid 4, dendrobium orchid 13.
39750 XNUMX ₽ Akara nke mkpụrụ osisi na orchid osisi "Paradise Phuket"
Strawberry 1250 gr., Blueberry 500 gr., Blackberry 500 gr., Currant 250 gr., Rasberi 375 gr., Peony 6 PC., Chamomile 9 PC., Pistachio, rịbọn, nkata.
19750 XNUMX ₽ Nkata na tomato na okooko osisi "Jiri obi m niile!"
ube oyibo 7, kiwi 2, bilie 7, chrysanthemum 3, lagurus 1 ụyọkọ, cherị tomato 15, eucalyptus 1 mkpọ, pistachio 3, igbe 1
8250 XNUMX ₽ Mejupụtara "Ube oyibo"
Nkata nke ifuru osisi: white cymbidium orchid 5 pcs, leucospermum 3 pcs, craspedia 6 pcs, ambrella 1 pc, aspidistra 3 pcs, salal 1/2 pack, mango fruit 3 pcs.
7750 XNUMX ₽ Nkata na okooko osisi na mkpụrụ osisi "kemmiri mango"
Igbe obi 20 * 10 - 1 pc. Strawberries ọhụrụ - 500 gr. Agba - 1 pc.
2950 XNUMX ₽ Ihe mejupụtara onyinye "Strawberry heart"
Strawberries ọhụrụ 1 n'arọ. - 1 PC. Akwụkwọ Tish - 1 pc. Nkata - 1 pc.
5750 XNUMX ₽ Nkata mkpụrụ osisi strawberry
Gosi nkata nkpuru osisi na ihe obula
Sweets na confectionery
Nkata na-acha anụnụ anụnụ-ude nke Roses, purple freesias, lisianthus, white alstroemeria, yana tii na can, biscuits nwere ike, Lindt chocolate, na nkata.
9350 XNUMX ₽ Nkata na okooko osisi, tii na ato uto "Matre"
4690 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 323
4950 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 324
Bouquet nke Fikiere mkpụrụ osisi.
4350 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 4
Udara ụmụ nwoke bouquet.
4050 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 6
Chocolate kpuchie strawberries
4050 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 24
Aku-Fikiere mkpụrụ bouquet!
3750 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 41
4050 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 42
"My gourmet" Efrata: painiapulu, mkpụrụ, mkpụrụ osisi a mịrị amị, obere ego, mango
3150 XNUMX ₽ Bouquet nọmba 61
Gosi ihe uto na achicha niile
Elinyefe okirikiri okooko osisi na Moscow na Floristum.ru
Floristum bụ ọrụ maka ịtụ nnyefe ifuru na Moscow na Russia niile.
Na Floristum.ru ị nwere ike ịnye ùkwù na nnyefe ọfịs gị ma ọ bụ ụlọ gị na Moscow site na netwọkụ gọọmentị etiti ụlọ ahịa ifuru nwere oke ọnụahịa-ogo dị mma. Cheta na onu di ala adighi adighi nma na mma ya. Mana ọnụahịa anyị, ùkwù okooko osisi a ga-enyefe gị, ga-atọ gị ụtọ. Tụlee onyinye na ihe ndị yiri ya nke ndị na-ere okooko osisi na ụlọ ahịa ndị edobere na Floristum na Moscow ma ọ bụ obodo ọzọ ị họọrọ.
Site na ịnye akwụkwọ bouquet na nnyefe na Moscow n'ụlọ gị ma ọ bụ n'ọfịs gị - gị, ma ọ bụ onye ịchọrọ ịju anya, ga-ekwe nkwa ịnata nhazi ifuru ọhụrụ na nke ọkachamara nke ọma na adreesị akọwapụtara na n'ime oge akọwapụtara.
Onye ozi ahụ ga-eji ihu ọchị nyefee onyinye ahụ, jiri obi ụtọ na-ekele gị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, aha onye zitere ya, ma were foto nke oge nnyefe ahụ, yana nnata nke nnata. A na-enweta ọrụ nnyefe ifuru n’ehihie na n’obodo ọ bụla n’obodo!
Ijikwa director nke anyị ifuru ụlọ ahịa na ahụmahụ florists nwere mmasị n'ebe ị, dị ka a asịwo na gị addressee, na-enwe afọ ojuju, na-ahapụ nti nzaghachi na-enwe ekele maka ọrụ mere na peeji nke usoro si website. Ahịa ndị ahịa na-emetụta ogo ụlọ ahịa na ndị na-ere ifuru ọ bụla, nke na-ekpebi ugboro ole ịtụ ahịa okooko osisi site na ndị na-ere floris.
A na-echekwa usoro ifuru ọ bụla na Moscow site na sistemụ ogo Floristum yana nkwa nke nkwụghachi nkwụghachi nke ego akwụgoro onye zụrụ ya ma ọ bụrụ na ọ dị ike. Anyị na-enyocha ọrụ ụlọ ahịa anya, yabụ ọ bụrụ na esemokwu bilitere, deegara ọrụ anyị na adres egosiri na saịtị ahụ.
Mgbe ị na-akwụ ụgwọ na weebụsaịtị n'iji kaadị akụ, ego anaghị akwụ ụgwọ na akaụntụ gị, mana oyi kpọnwụrụ na mpempe akwụkwọ, nke a na-enye anyị ohere ịkwado ngwa ngwa weghachite ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke ego ahụ na-enweghị ọrụ na ọnwụ nwa oge ma ọ bụrụ na anyị emee ọrụ anyị ọbụlagodi na February 14 na 8 Mata. Nwere ike itinye akwụkwọ ikike n’ime ụbọchị atọ.
Anyị na ụlọ ọrụ iwu kwadoro na-arụkwa ọrụ site na nnyefe ego
Bouquets with payment by bank transfer to legal entities, maka ndị ọrụ nke òtù, ndị ahịa ha na nnyefe n'ọfịs na ụlọ bụ otu n'ime isi ọrụ anyị. Nwere ike ịtụ ahịa akwụkwọ onye ode akwụkwọ na nnyefe na Moscow ugbu a, ma kwụọ ụgwọ site na ụlọ akụ nke ụlọ ọrụ iwu!
Anyị na-enye ngwugwu zuru ezu nke akwụkwọ mmechi maka ngwongwo zụtara n'aka anyị. Gụkwuo na ngalaba nnyefe nke ùkwù okooko osisi site na nnyefe ego na Moscow
Obodo ndị ama ama:
Osisi ndị mara mma:
Lulu lulu Calla,
Ifuru niile ...
Asụsụ ndị ama ama:
Asụsụ niile ...
Esi emeghe ụlọ ahịa
Maka ndị ahịa
nye ndị ahịa ụlọ ọrụ
Banye na akaụntụ nkeonwe gị
Nkwupụta ihu ọha na njedebe nke nkwekọrịta ịzụta na ire ere
Shoplọ ahịa ifuru na Moscow:
Moscow, Vodoprovodny uzo uzo d2 st1
Ngwa ahụ bara uru karị ma dị mfe karị!
Ego 100 rubles si bouquet na ngwa!
Budata Floristum ngwa site na njikọ dị na sms:
zipu njikọ site na SMS *
Budata ngwa ahụ site na ịgụ QR koodu:
* Site na ịpị bọtịnụ ahụ, ị ​​kwadoro ikike iwu gị, yana nkwenye na amụma nzuzo, Nkwenye data nkeonwe и Ihu ọha